‘सार्क फिल्म फेस्टिभल’ मा स्वस्तिमाले जितिन् अवार्ड - VOICE OF NEPAL
२३ असार २०७६, सोमबार १२:२४ 68 ??? ???????
विनोद पौडेल निर्देशित फिल्म बुलबुलले श्रीलंकामा आयोजित ‘दी सार्क फिल्म फेस्टिभल २०१९’ मा अवार्ड जित्न सफल भएको छ । यस फिल्ममा स्वस्तिमाले टेम्पो चालक महिलाको जिवन्त अभिनय गरेकी थिइन् । फेस्टिभलमा स्वस्तिमाले ‘वेष्ट पफर्मर जुरी अवार्ड२०१९’ जितेकी हुन् । अवार्ड जितेपछि उनले फेसबुकमार्फत् आफ्ना प्रशंसकसँग खुसी साटेकी छन् ।
स्वस्तिमाले फिल्मी करिअरमा पहिलो पटक अवार्ड जितेकी हुन् । उनले ‘सार्क फिल्म फेस्टिभल’ मा जितेको अवार्ड बुलबल टिमलाई समर्पित गर्न चाहने फेसबुकमा उल्लेख गरेकी छन् । अवार्ड जितेपछि उनले आफू निकै खुसी भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । जुलाई २ देखि ७ सम्म भएको उक्त फिल्म फेस्टिभलमा सहभागी हुन उनी गएको हप्ता श्रीलंका पुगेकी थिइन् ।
बुलबुलु सँगै यस फेस्टिभलमा प्रसाद र हरिले पनि नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागिता जनाएका थिए । अवार्ड जितेपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै स्वस्तिमाले भनिन्, ‘पहिलो अवार्ड नै अन्तर्राष्ट्रिय पाएँ । एकदमै खुसी छु ।